Inona No Niteraka ilay Korontana Tany Yan Zhou?: Misongadina Ny Tsy Fahampian’ny Fampahalalam-baovao Any Shina · Global Voices teny Malagasy
Inona No Niteraka ilay Korontana Tany Yan Zhou?: Misongadina Ny Tsy Fahampian'ny Fampahalalam-baovao Any Shina
Voadika ny 12 Jona 2016 4:14 GMT
Sary nalefa tamin'ny mediam-bahoaka (tamin'ny alalan'ny Epoch Times)
Ny lahatsary etsy ambany dia mampiseho vahoaka tezitra mamadika ambony ambany fiara roa an'ny polisy, raha ny polisy avy any amin'ny tanànan'i Yan Zhou any amin'ny faritanin'i Shandong mbola an-dàlam-panaterana vehivavy iray avy amin'ny toerana nisehoana heloka bevava ny 8 Jona.
Inona no nahatonga ny olona an-jatony ho tezitra mafy? Nahoana ny hatezeran'izy ireo no nitodika nankany amin'ny polisy?
Namoaka tatitra ny polisin'i Shandong, tamin'ny alalan'ny Weibo ofisialiny sy ny media lehibe tantanan'ny fanjakana, ka nanambara fa ilay tabataba dia nateraky ny tsy fifankazahoan-kevitra mifandray amin'ny ady teo amin'ny vehivavy roa, nefa ny ankamaroan'ny Shinoa mpampiasa aterineto nanana fanazavana hafa momba ny zava-nitranga.
Toy izao ny fizotry ny tantara eken'ny ankamaroan'ny olona ho marina: Tamin'ny 9 ora maraina teo ho eo ny 8 Aogositra, nisy “mpaka an-keriny” efatra nikasa hangalatra zaza telo taona teny amin'ny reniny, teo akaikin'ny faribohitra toeram-ponenana ao Yan Zhou.
Voasakan'ny mponina ireo “mpaka an-keriny”, notazonina teo an-toerana ny vehivavy iray mandritra ny fiandrasan'izy ireo ny polisy.
Fantatry ny olona avy hatrany fa ilay vehivavy ahiahiana, Shinoa Han, dia avy any Xinjiang, faritra iray matetika mifandray amin'ny asa fanaovana heloka bevava sy fisintahana mandritra ny lahateny ampahibemaso.
Tamin'ny iray amin'ireo lahatsary niparitaka be momba ny zava-nitranga izay nipoitra tao amin'ny mediam-bahoaka, no nahafahana nihaino vehivavy iray nanontanian'ny vahoaka mahery vaika ary nanao hoe: “Tsy mbola nangalatra [ilay zaza] aho” (我又没偷成).
Voatanisa ho porofon'ny fakàna an-keriny tsy nahomby notohern'ny vahoaka ilay lahatsary. Nofafàna ilay izy tatỳ aoriana.
(Ny NTDTV, fahitalavitra miteny Shinoa miorina ao New York dia nampiasa sary sasany avy amin'ilay lahatsary tao anatin'ny fampahalalam-baovao nataony).
Araka ny tatitry ny NTDTV, tezitra ny vahoaka satria 40 minitra mahery vao tonga teny an-toerana ny polisy ary naneho ny fahasorenany ny sasany tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanonganana fiara roa an'ny polisy.
Vaotery niantso fanampiana ny polisy mba hampitsaharana ilay rotaka ary olona teo amin'ny 17 teo no voasambotra.
Ny lahatsoratra weibo etsy ambany izay notanisain'ny famoaham-baovao maro dia maneho ny fihetsehampon'ny vahoaka tezitra:
Manatsoaka hevitra vitsivitsy avy amin'ny zava-nitranga momba ilay fakàna an-keriny tao amin'ny tanàna niaviako Zhou Yan aho: 1. Mifanampy ny samy olon-tsotra, satria izy ireo tsy afaka miantehitra afa tsy amin'ny samy izy ihany;
2. 110 [laharana vonjy taitra] dia laharana ahazoana miantso mivantana fotsiny, miankina amin'ny toepon'izy ireo ny fanatanterahany ny asa;
3. Sahirana be ny polisy amin'ny fametrahana fandrika hisamborana “fivarotantena” ! Tsy afaka hahazo vola izy ireo rehefa misy zaza very, fa mahazo anjara rehefa mahasambotra mpanjifan'ny vehivavy mpivarotena;
4. Tokony hampiditra lalàna vaovao ny fanjakana mba ahafahan'ny olona mamono ny mpaka an-keriny, ka amin'izay izy ireo tsy hanelingelina ny “polisim-bahoaka”. Tsy misy maha samy hafa ny hoe tara ny fidirana an-tsehatra ataon'ny polisy sy ny hoe tsy misy ny fidirana an-tsehatra ataon'ny polisy;
5. Amin'ny ho avy , ny andraikitry ny polisy dia tokony ho faritana ho toy ny fisamborana [fandraisana anjara amin'ny] fivarotantena sy ny fiarovana ny manampahefana ao amin'ny governemanta, tsy mila hiantehitra amin'izy ireo ny olon-tsotra.
Na izany aza, nanasokajy ilay zava-nitranga ho toy ny tsy fifankahazoan-kevitra ny polisy ao amin'ny faritanin'i Shandong.
Niezaka ny hanakana reny iray nikapoka ny zanany ilay vehivavy ahiana, hoy ny polisy, ka nahatonga ny fifamaliana teo amin'ireo vehivavy roa ireo.
Nihevitra ny mpandalo fa mpaka an-keriny ilay vehivavy, nohodidinin'izy ireo izy io ary nodarohany.
Mifanohy amin'izay ihany, voadaroka ihany koa ny lehilahy iray hafa izay noheverina ho mpaka an-keriny.
Nentin'ny polisy tany amin'ny hopitaly ireo olona roa “noahiahiana” ireo.
Maro ny mpampiasa aterineto no nahita ilay tatitra ofisialy ho hevi-dravina, ka ny blaogera antsoina hoe “Tea-leaf should stay in water” (Tokony hijanona anaty rano ny ravin-dite) dia manakiana ny filazana ofisialy toy izao manaraka izao:
Mandiso ny marina ny filazana ofisialy ka miampanga ny olon-tsotra ho mora voafitaka. Nanjary zazalahy tsara fanahy izay niezaka ny hampitsahatra ady ilay mpaka an-keriny, voadio ho fotsy ny mainty ary ny lehilahy ratsy lasa mahery fo, izay nandeha manerana ny firenena nanomboka tany Xinjiang ary niafara tany Shandong mba hampitsahatra ny ady. Iza no dondrona, ny olona tao an-tanànan'i Yan Zhou sa ny mediam-panjakana? Tao amin'ilay lahatsary, nilaza ilay vehivavy hoe “Tsy mbola nangalatra [ilay zaza] aho.” Nilaza ny olona nanodidina azy nanao hoe: ahoana no ahasahianao mangalatra zanak'olon-kafa. Tsy niteny na inona na inona mba hiarovany tena ilay vehivavy. Iza no mody adala? Ny olona tao an-tanàn'i Yan Zhou sa ny mediam-panjakana? Tsy nanameloka ny polisy ianareo noho ny 40 minitra fahataran'ny fidirany an-tsehatra, tsy nanameloka ny mpaka an-keriny ianareo. Ny olona izay tonga namonjy ihany no nomelohanareo. Iza no jamba? Ny olona avy any Yan Zhou sa ny mediam-panjakana?
Nasian'ny olona maro akony tao amin'ny kofehy fanehoan-kevitra momba ilay lahatsora-baovao ny hevitra etsy ambony:
“我又没偷成” […] 说是暴民的看看那个视频吧。人贩子可恶，警察40分钟才来到现场。掀翻是因为太生气。如果40分钟前孩子被偷成功，人贩子早逃出兖州了。只能说兖州人团结，没有冷漠的对待这个社会。官方嘴里的暴民救了孩子。
“Tsy mbola nangalatra aho” […] Mba jereo kely ilay lahatsary azafady. Olon-dratsy ny mpaka an-keriny ary 40 minitra ny polisy vao tonga tany an-toerana. Navadik'izy ireo ambony ambany ny fiara noho ny hatezerany. Raha toa ka nangalarina ilay zaza, afaka niala an'i Yan Zhou amin'ny fanomezana 40 minitra maimaim-poana ireo mpaka an-keriny. Nifanome tànana ny olona avy any Yan Zhou ary namonjy ilay zaza ireo ambara ho “mpirotaka”.
Nefa marina izay voalaza rehetra, mampiseho tsy fatokisana lalina na amin'ny fampiharana ny lalàna eo an-toerana na ny mediam-panjakana, lafin-javatra vita tsara tamin'ny fanehoankevitra iray malaza ao anaty Weibo ilay zava-nitranga.
Tsy ny tsy fifankahazoan-kevitra no mampivarahontsana, fa ny tsy fahatokisana. Fipoahana iray hafa izany [toy ny] tranga mitovy amin'izany. Sarotra ny fiainana – fidiram-bola kely sy hetra mavesatra. Tsy misy fiheverana ny fiahiana ara-tsosialy ary koa ny [olona] tsy maintsy miatrika ny fanetrena amin'ny ambaratonga rehetra avy amin'ny manampahefana. Taratry ny toe-piainany fotsiny ny zava-nitranga, ary, mandritra ny fotoana maharitra, mety hitranga ny fipoahana goavana. Amin'izay fotoana izay, tsy ho mora sarihana ho any amin'ny fihetsehampo fankahalàna Japoney ny hatezerana.